Lwesine, Okthobha 5, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UGoogle uyaqhubeka nokundimangaza. Ukuba bendingekho eIndiana kunye noGoogle kuMboniso weNtaba, ngendibe ndenze isicelo sobume bokugcina izindlu ngoku. Kunye imigca 37signals, UGoogle unekhono lokuchonga ingxaki, emva koko eze nesisombululo. Ixesha. Akukho zinto zinqabileyo… ziyenza isebenze!
I-Google Codesearch ikuvumela ukuba ukhangele ikhowudi engeniswe kumnatha. Kuba yi-beta, ndinengxelo eyakhayo kuGoogle:
Iinkqubo ezininzi zigxile… PHP, .NET, MSSQL, njl. Ndicinga ukuba ukhetho lokuseta ukhetho lwakho lokukhangela kwaye iphepha liligcine kwiakhawunti yomsebenzisi okanye ngecookie ingangummangaliso. Ukuba abenzi njalo, ndiza kuzakhela okwam (kulula kakhulu ukufaka i-lang: php apho).
Uza kwenza ntoni malunga ne-virii okanye ikhowudi enokuthi yephule amalungelo obunini? Into yokuqala enye yabahlobo bam eyayiqaphele ilulwane ukuba unokukhangela kwiiGenerator eziphambili, umzekelo: Winzip. Kuya kufuneka baqonde ukuba le iyakuba yindawo yabaphangi kunye nabaqhekezi!
Ngelishwa, akukho ndlela yokuthumela amanqaku malunga nekhowudi yokubhala kunye neesampulu zekhowudi. Ndiyayibulela ikhowudi phaya, kodwa okona kubaluleke ngakumbi kukuchaza into eyenzayo kunye nendlela esebenza ngayo. Ndingathanda ithuba lokuthumela ukungena kwam ibhlog phantsi kwamagama aphambili, mhlawumbi ukhetho lwamanqaku okukhangela.
Oku nje kukugxeka okwakhayo… akukho ndlela yakukujongela phantsi ukubaluleka kwesi sixhobo simnandi kangaka! Sele ndiqalisile ukuyisebenzisa kwaye ndifumene iziphumo ezithembisayo.
IWebhusayithi yeWal-Mart yeNtanethi yeWebhusayithi iyasilela. $ 50 kweyona joke intle!
IAlgebra neJometri… ndiza kuyisebenzisa nini? Iimaphu zikagoogle!